Sarin'ny Tetikasa momba ny fandatsahan-jaza an'i Allen Harbour - Blog Ellisott Dredges
Saripika momba ny tetik'asa fanondranana an'i Allen Harbour
Novambra 1, 2009
Oktobra -Ny 2004
Harbormaster Tom Leach dia nanambara tamin'ny mpitantana ny tanàna fa ny tetikasa Allen Harbour Dredging ho an'ny 2004 dia notanterahina tamin'ny Alakamisy, Novambra 4, 2004, nataon'ny departemanta Barnstable County Dredging. Mampiasa marika Ellicott® marika 670 "DRAGON®" antsoina hoe "CODFISH"Ny ekipan'ny dredge County dia nanalalina ny fantson'ny fidirana an'i Allen Harbour amin'ny halalin'ny fifehezana fahazoana 6 ft. Ao amin'ny 100 ft ny sakany mihoatra ny 2800 ft. Amin'ny fantsom-baravarana 12,000 yd³ mankany amin'ny torolàlana ho an'ny daholobe sy tsy miankina akaiky, araka ny fanapahan'ny filan'ny Selectmen. Ny Harbormaster dia namela fitaovana fanampiny 2,000 fanampiny azo raisina hahatratra ny halalin'ny fifehezana. Ny vidin'ny tetikasa $ 66,000 amin'ny $ 5.55 / yd³ dia karama miaraka amin'ny andian-dahatsoratra antsoina hoe Tahiry fitahirizana ny tanàna. Ny fitaovana tamin'ity tetikasa ity dia tsy napetraka tany amoron-dranomasina atsinanan'i Allen Harbour hatramin'ny 1998 fony 2,417yd³ napetraka tao amoron-dranomasin'i Wah Wah Taysee.
Misaotra betsaka an'i Wayne Jaedtke sy ireo ekipan'ny dredge ao amin'ny County noho ny fiezahan'izy ireo nanatontosa ny asa vita tamin'ny fanalavana ny Allen Harbor Channel mankany 6 ft. Mifehy ny halaliny dia ho mazava ny fandehanana ny fivezivezen'ny sambo ary ny mpandeha an-dranomasina dia afaka mandalo ara-dalàna izao.
Allan Harbour dredging tetikasa
Nahavita ny tetik'ady fanondranana an'i Allen Harbour 11 / 04 / 04 mijery atsinanana avy amin'ny lalana Wah Wah Taysee Road
Mitsangantsangana eny amin'ny tora-pasika ao amin'ny morontsiraka vaovao Wah Wah Taysee
Be dia be ny fararano ao amin'ny seranan'i Allen. Tsara sy malalaka ny tora-pasika. Mariho ny sisin-dranomasina miafara amin'ny Cottage Ave. ary Lincoln Ave. (crédit sary Tom Leach 11 / 4 / 04)
Ity sarin'ny tetik'asa fanondrahana feno ity tamin'ny volana Novambra NIKY 2004 mijery miankandrefana avy any Cottage Ave. mankany Hulse Point. Sary nalain'i Tom Leach
Manodidina ny antsasaky ny tetikasa. Vato eny anaty rano mandeha eo anoloana dia halevina ao akaikin'ny tranon'i Kugler. Ny fipoahana dia ara-bakiteny no fototr'ireo fitarainana natao teto amin'ity faritra ity talohan'ny nanombohan'ny tetikasa.
Ny fantsona dredge dia mametraka fasika any amin'ny faritr'i Wah Wah Taysee Road amin'ny fanombohan'ny tetik'ady fanamoriana fantsona. Fenoy famenoana dia azo jerena ao ambadiky ny fanariana fako, manomboka amin'ny Oktobra, 2004
Miandry sakafo ny Seagulls satria mandoto fasika sy rano ny fantsona dredge. Izany no kodiarana marika CODFISH Barnstable County Ellicott® ao ambadika. Sarin'ny birao Harwich Harbormasters.
Harbormaster Tom Leach sy Wayne Jaedtke, Coordinator Dredge ao amin'ny Wah Wah Taysee mijery atsinanana manaraka an'i Wynderemere Bluff 11 / 1 / 04
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetikasan'ny fandotoana anao